kbs — Thu, 07/24/2008 - 20:35
धेरै वर्षबाहिर बिताएर उमा आफ्नो गाउंघरमा मीठो सपना लिएर र्फकदै छे । बस यात्रुहरूले खचाखच छ र ऊ यिनै यात्रुहरूको साथमा शरीरलाई थरथराउंदै गुडिरहेकी छे । झण्डै १२ घण्टाको यात्रा तय गरिसकेकी छे । अब त बिहान पनि भइसकेको छ, त्यसैले ऊ झयालबाट बाहिर हेर्छ। उसका आंखाहरू ती हरिया डांडाहरू, डांडापारिका श्वेत हिमशिखर सबैलाई समेट्न आतुर हुन्छन्, मानौं ती हराएका दृश्यहरू आज उसको अगाडि एक्कासी आइपरेको छ । ऊ रम्छे, हतारिन्छे टाढाटाढासम्म आंखा दौडाइ खोजिरहन्छे आफ्नो देशको प्राकृतिक छटाहरू, आफ्नै विशेषता बोकेको त्यो सौर्न्दर्य, जुन अपूर्व छन् । छहराको छ्वाङ'छ्वाङ आवाजले उसको ध्यान त्यतातिर आकर्षा गराउंछ र त्यसलाई दर्ेहाहेर्दै ऊ पनि त्यसैसाथ छलाङ्ग मार्छर्ेेसम्झनाको खोंचमा कल्पनाको तानावाना लिएर ।
kbs — Thu, 07/24/2008 - 20:27
kbs — Wed, 07/23/2008 - 19:53
अचानक राति फोनको घण्टी बज्यो । त्यो आवाजले मेरो मुटु र कानलाई छेडेर गयो । अशुभ समाचार हो कि भन्ने डरले निकैबेर फोनको रिङ बज्दा पनि झ्वाट्टै फोन उठाउने आँट आएन । लाग्यो मानौं स्वयं फोनसेट नै आतङ्ककारी भएर उपस्थित भएको छ मेरो सम्मुख । बल्लबल्ल फोन उठाएर 'हेलो' मात्र भनेकी थिएँ उताबाट स्वास्नीमान्छेको रूवाइ सुनेर बिस्मित भए म । यो सपना हो कि विपना हो ? जति रूवाइ सुन्छु त्यति त्यो रूवाइको स्वर चिरपरिचित लाग्यो । नत मैले को रोएको भनेर सोध्न नै सकें नत फोन राख्न नै सकें तर त्यो स्वरले गिज्याइरहृयो, रन्काइरहृयो मेरो सर्बाङ्गभरि ।
kbs — Wed, 07/23/2008 - 19:51
'चन्द्रे हुा म चन्द्रे !......' आवाज प्रस्ट बुझिनेछ
मान्छेहरूका दृष्टिमा चन्द्रे एउटा बहुला थियो तर आफूले पाएको यो पहिचानलाई चन्दे्रले कहिले पनि विरोध नजनाएको देख्दा सामान्यतः सबैलाई आश्चर्य लाग्नु स्वाभाविक थियो । हुन पनि चन्द्रे चिच्याई चिच्याइकन भन्ने गथ्र्यो- "हो-हो म बहुला हुँ । किनकि..... म चन्द्रे हुँ ।"
kbs — Wed, 07/23/2008 - 18:32
kbs — Wed, 07/23/2008 - 17:54
ऊसित एक्कासि भेट भएको थियो । एक्कासि नै भन्नुपर्छ । ५० वर्षपछि । यसलाई के भन्नू ?
५० वर्षअघि हामी कतिपटक एउटै थालमा खान्थ्याँै । स्कुलमा एउटै बेन्चमा बस्थ्यौँ । त्यसरी क्लास चलिरहँदा पनि खासखुस गर्न सजिलो हुन्थ्यो । कहिलेकाहीँ हाँसेकोमा मास्टरले कान बेस्सरी घुमाइदिन्थ्यो, घडीमा दम दिएजस्तै । डिजिटल घडीको जमाना आएको थिएन । ऊ मभन्दा पढ्नमा तीक्ष्ण थियो । तैपनि मसित पछिल्लो बेन्चमा बस्थ्यो । म जतिसक्यो पछिल्तिर बस्न रुचाउँथेँ, रहर होइन, बाध्यता भनेजस्तै । पछिल्तिर बस्दा मास्टरको सामना गर्नु नपर्ला भन्ने भ्रमले ।
kbs — Wed, 07/23/2008 - 17:18
उसका रुप कति थिए कसैलाई थाहा थिएन। ऊ आफ्ना केही रुप जङ्गलमै छाडेर शहर'यात्रामा निस्क्यो। शहर'यात्राको पहिलो दिन ऊ चौबाटोमा पुगेर उभियो। ऊ उभिएको बाहेक अरू बाटाहरू तीनतिर छरिएका थिए। ऊ आएको बाटो पहिल्याउँदै जाने हो भने सो अन्धकार जङ्गल पुगिन्थ्यो, जहाँ कुकुरडाइनाका काँढाहरूले जेलिएको अस्पष्ट बाटो थियो। उसलाई राम्ररी थाहा थियो शहर'यात्राअघि ऊ आएको अनकन्टार जङ्गलको बाटो प्रस्ट थिएन।
kbs — Wed, 07/23/2008 - 17:15
kbs — Wed, 07/23/2008 - 17:12
कात्तिक पहिलो साताको एक बिहान। बाक्लो कुहिरोले गाउँ छोपिएको थियो। कुनै कुनै वर्षको जाडो अलि चाँडै आउँछ त्यो गाउँमा।